Nezve Goldencell - Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd.
Shandong Goldencell Electronics Tekinoroji iri kuita chero kuedza kugadzira iyo hombe yegirinhi simba base mumatunhu ekuchamhembe muChina.Iyo lithium iron phosphate cathode zvinhu uye iyo lithium iron phosphate simba bhatiri inogadzirwa neboka pachayo uye yakazvimirira yehungwaru pfuma kodzero yayo ndeyeboka, ine yakanaka yakakwira uye yakaderera tembiricha yekuburitsa kuita uye yakanyanya kuchengetedzwa uye kusimba, uye zvakadaro. kuita zvakanaka munzvimbo ine tembiricha iri pakati -41 ℃ ne +80 ℃, uye haisi pasi pekuputika uye kupiswa nekuda kwekuwedzeresa-chaji, kuburitsa zvakanyanya, tembiricha yakakwira, kupfupika, kurova uye kudonha, kusvinwa, uye kubaya. , uye lithium iron phosphate power bhatiri ndiyo yakachengeteka lithium ion bhatiri iro rinozivikanwa pasi rose parizvino.
Zvichienderana nemhando, kugona, uye kukanda mhando yemhando, Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd ichashandisa hunyanzvi kuunza pamwechete hutsva, hunoenderana nekusimudzira musika, uye kushandisa "core" kuvhenekera nyika.Iyo kambani inoda kuramba ichipa kuvimbika kwepamusoro uye zvigadzirwa zvesimba idzva kunharaunda, uye kuyedza kusimudzira kusimudzira kwakasimba kwesimba rakasvibira revanhu!
Kutsvaga kwezvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kuzvipira kune simba rakasvibirira, kupfuura kugutsikana kwevatengi, kutungamirira simba remangwana.
Nemweya wemhizha, kugadzira zvigadzirwa zveGoldencell.
Kuve inotungamira girini uye nyowani simba bhizinesi muindasitiri.
Nyika Kugoverwa Kwevatengi Vese
Tekinoroji R&D timu
Production Management Dhipatimendi